/g,'>').replace(/"/g,'"'), data = data_escaped.replace(/([\_u1031\_u103A]*)([\_u1000-\_u1021])/g,"$1\_u200b$2").replace(/\_u1031/g,"\_u200b\_u1031"); if (data != data_escaped) $(this).replaceWith(data); }); }); လင္းဦး(စိတ္ပညာ) _ Lin Oo: Auto Messenger Virus Prevention
Virus ကို ကာကွယ်ဖို့​ဆိုြပီး​ Application အ​ေြကာင်း​ ​ေြပာြပမယ် မထင်ပါနဲ့​။ Messenger Virus ​ေခါ် ထပ်ပွား​ Virus ​ေတွ ကူး​စက်မှုကို မိမိကိုယ်တိုင် ကာကွယ်ဖို့​ ​ေြပာြပချင်တာပါ။ ​ေတွ့​ြကံု​ေနရတဲ့​ Google Talk က​ေနတစ်မျိုး​၊​ Facebook ချက်​ေဘာက်က​ေနတစ်ဖံု လင့်​ေတွ ပို့​ပို့​ြပီး​ ဒုက္ခ​ေပး​တာဟာ ​ေန့​စဉ် အင်တာနက်သံုး​သူ​ေတွ တစ်ဆင့်​ချင်း​ တစ်​ေယာက်ချင်း​စီ ပျံ့​နှံ့​ေနတာ ြကာပါြပီ။ ဒီအတွက်လည်း​ Removal Softwares ​ေတွထုတ်ြပီး​ ​ေြဖရှင်း​ြကတာမျိုး​။ စက်ထဲက သူတို့​သွား​နိုင်မယ့်​ ​ေနရာမှာ ဖယ်ရှား​ရှင်း​လင်း​ပစ်တာမျိုး​ေတွ လုပ်ြကပါတယ်။
တကယ်တမ်း​ စဉ်း​စား​ြကည့်​ရင် ဒီ Virus Link ​ေတွဟာ ဦး​ဆံုး​ ကူး​စက်ခံရသူရဲ့​ Chat မှတဆင့်​ ထပ်မံ ပို့​ေဆာင်ြကတယ်။ Chat List ထဲက သူငယ်ချင်း​ေတွကလည်း​ Link ကို ဘာမှန်း​မသိ နှိပ်မိြကတယ်။ ထပ်ပွား​ြကတယ်။
I'm single from India. ASL please ၊​ ဒီ​ေနာက် Spycam ဆိုြပီး​တစ်မျိုး​၊​ love virus ဆိုြပီး​တစ်ဖံု၊​ Youtube လင့်​ေပး​ြပီး​ Flash ​ေဒါင်း​ခိုင်း​ြပီး​ ဒုက္ခ​ေပး​တာမျိုး​၊​ HAHA LoL is this your picture? OMG is this your picture? ဆိုြပီး​ Link ​ေတွ ​ေပး​ပို့​ြပီး​ ဒုက္ခ​ေပး​မှု ​ေပါင်း​စံု ြဖစ်​ေပါ်ခဲ့​တယ်။
အဲ့​ေတာ့​ စဉ်း​စား​ြကည့်​ရင် ရှင်း​ရှင်း​ေလး​ရယ်ပါ။ ကျွန်​ေတာ်တို့​အား​လံုး​ ဒီလို Messenger Virus ​ေခါ် ထပ်ပွား​ ဗိုင်း​ရပ်​ေတွ မထိြက​ေအာင် အား​လံုး​မှာ ​ေစာင့်​ထိန်း​ရမယ့်​ Online Chat စည်း​ကမ်း​ေလး​လိုပါတယ်။ ဒီစည်း​မျဉ်း​စည်း​ကမ်း​ကို မလိုက်နာရင်လည်း​ ဘာြပစ်မှုမှလည်း​ မြဖစ်နိုင်သလို တကယ်တမ်း​ အဲ့​လိုသာ လိုက်နာလိုက်ရင် ဒီ Virus ရန်က ကင်း​ေဝး​မှာပါပဲ။
“မိမိက​ေန အြခား​သူငယ်ချင်း​ကို ဖတ်လို​ေသာ Website Link တစ်ခုခု ​ေပး​မယ်ဆိုရင် ဦး​ဆံုး​ ​ေခါင်း​စဉ်/ အ​ေြကာင်း​အရာကို ​ေြပာြပ​ေစချင်ပါတယ်။ ဥပမာ- ဒီ Link က လွတ်လာတဲ့​သူ​ေတွအား​လံုး​နဲ့​ ​ေတွ့​ဆံု​ေမး​ြမန်း​ခန်း​ေလး​ပါ- ဆိုြပီး​ ​ေြပာြပီး​မှ Link ​ေလး​ချ​ေပး​လိုက်တာဟာ အ​ေကာင်း​ဆံုး​ပါပဲ။ ဒါမှလည်း​ မိမိသူငယ်ချင်း​ဟာ စိတ်ချလက်ချနဲ့​ Link ကိုနှိပ်ြပီး​ သွား​ြကည့်​နိုင်မှာပါ။”
“​ေနာက်တစ်ချက်က မိမိသူငယ်ချင်း​ေတွဆီမှ Link ​ေတွ ​ေရာက်လာရင် မ​ေမး​ မစမ်း​ပဲနဲ့​ သွား​မနှိပ်မိဖို့​ပါပဲ။ ဒီအတိုင်း​ ဘာမှမ​ေြပာပဲ လာတဲ့​လင့်​ေတွကို မနှိပ်မိဖို့​ပါ။ ဒီအတိုင်း​ထား​လိုက်ပါ။ အကယ်၍ မိမိသူငယ်ချင်း​က ခုဏက Link ြကည့်​ြပီး​ြပီလား​လို့​ ​ေမး​လာမှာပါပဲ။ ဒါဆိုရင် မိမိသူငယ်ချင်း​က သူကိုယ်တိုင် ပို့​တဲ့​ Link တစ်ခုဆိုတာ ​ေသချာြပီ​ေပါ့​။”
အထက်ပါ (၂)ချက်ကို ​ေသချာစဉ်း​စား​ြပီး​ လူတိုင်း​ လိုက်နာလိုက်ရင် Auto Messenger Virus ရန်​ေတွက​ေန ကင်း​ေဝး​နိုင်ပါြပီ။ ကျွန်​ေတာ် အထက်မှာ ​ေြပာခဲ့​သလို ဥပ​ေဒသ တစ်ခုမဟုတ်​ေသာ်ြငား​လည်း​ ဒီလို ​ေစာင့်​ထိန်း​မှု​ေတွရှိရင် ဒီလို Virus ရန်မျိုး​ေတွက​ေန ကင်း​ေဝနိုင်မှာပါ။
အခုအခါမှာ Twitter လိုမျိုး​မှာ မိမိ​ေန့​စဉ်မှတ်တမ်း​ ​ေရး​တင်တာမျိုး​က​ေနအစြပုြပီး​ web short link ​ေတွ သံုး​လာြကတယ်။ Google ကလည်း​ goo.gl ဆိုြပီး​ Service ​ေတွကို ​ေပး​ထား​ပါတယ်။ အြခား​ေသာ Web short link ​ေပး​တဲ့​ ဆိုက်​ေတွလည်း​ ​ေပါ်ထွက်​ေနပါြပီ။ တစ်ဖက်က Link အရှည်​ေတွကို ချံု့​ပစ်လိုက်တာဟာ ​ေကာင်း​ကျိုး​ေတွ​ေပး​ေန​ေပမယ့်​ တစ်ဖက်မှာ​ေတာ့​ ဒီ short link ​ေတွဟာ ဗိုင်း​ရပ်စ်ြဖန့်​သူ၊​ ဟက်ကာ များ​အတွက် အသံုး​ချစရာ နည်း​လမ်း​သစ်တစ်ခုအြဖစ် ဖန်တီး​ေပး​ေနသလို ြဖစ်​ေနြပန်ပါတယ်။ သူတို့​ရဲ့​ Virus ထား​ရာ Hosting တစ်ခုခုကို ဒီ Short Link ​ေတွကို အသံုး​ြပုြပီး​ ပံုစံ​ေြပာင်း​ နှိပ်စက်ပါ​ေတာ့​တယ်။ ဒီအတွက် Short Link ​ေတွကိုလည်း​ သတိထား​ေစချင်ပါတယ်။
ကျွန်​ေတာ်တို့​ေတွဟာ ဒီလို ​ေစာင့်​ထိန်း​မှုမျိုး​၊​ အ​ေလ့​အထမျိုး​ေလး​ေတွ ရှိသင့်​ပါတယ်။ Antivirus Software ​ေပါင်း​များ​စွာ ထား​ထား​တာပဲကွာလို့​ ​ေြပာနိုင်​ေပမယ့်​ တစ်​ေန့​ထက်တစ်​ေန့​ ြမင့်​တက်​ေနတဲ့​ နည်း​ပညာ​ေတွနဲ့​အတူ ဒီ Software ​ေတွ မသိလိုက်တဲ့​ Virus အမျိုအစား​ေတွ များ​စွာ​ေပါ်ထွက်​ေနဦး​မှာပါပဲ။ တစ်ချို့​ Virus များ​ဆိုရင် Antivirus Software က သတ်လိုက်တယ်လို့​ ြပ​ေန​ေပမယ့်​ မိမိကွန်ပျူတာစက်ထဲကို ​ေရာက်ြပီး​ြပီဆိုတာမျိုး​ေတွ ရှိ​ေနတတ်ပါတယ်။
ကာကွယ်ြခင်း​ဟာ ကုသြခင်း​ထက် ​ေကာင်း​ပါတယ် ဆိုတာနဲ့​အညီ ကျွန်​ေတာ်တို့​ဟာ ဒီလိုမျိုး​ေလး​ေတွ ​ေရှာင်ြကဉ်လိုက်ရင် ဒီလို Virus မျိုး​ေတွက​ေန ကင်း​ေဝနိုင်မယ်လို့​ အြကံြပုပါရ​ေစ။
Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Sunday, January 15, 2012
​ဒီ​ပို့စ်​ေလး​ကို ​အ​ရင်​က​တည်း​က ​ဖတ်​ထား​မယ်​ဆို​ရင် ​ခု​လို​ြဖစ်​မှာ​မ​ဟုတ်​ဘူး​။​ ​ြဖစ်​ချင်​ေတာ့​ ​သူငယ်​ချင်း​တစ်​ေယာက်​နဲ့​စ​ကား​​ေြပာ​ေန​တာ..​၊​ ​သူ့​ဆီ​က ​လင့်​ဝင်​လာ​ေတာ့​ ​သူ​ပို့​တယ်​ပဲ​ထင်​တာ​ေပါ့​။​ ​အဲ​ဒါ​ေြကာင့်​ ​သွား​နှူိပ်​လိုက်​မိ​တာ..​။​ ​မ​နမ်း​ရဲ့​ ​ကွန်​ပျူ​တာ​ေလး​ထဲ​က ​ဗိုင်း​ရပ်စ်​ကို ​ရှင်း​​ေပး​တဲ့​အ​တွက်​လည်း​ ​ကို​လင်း​ဦး​ကို​ေကျး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ်​ရှင်..​။​
ဟုတ်​ကဲ့​ပါ... ​မနမ်း​​ေရ... ​ေရး​မယ် ​ေရး​မယ်​နဲ့​ ​အ​ခု​မှ ​ေရး​ြဖစ်​သွား​လို့​ပါ​။​